Fondation H: hotohizan’i Donn ny fampirantiana | NewsMada
Fondation H: hotohizan’i Donn ny fampirantiana
Sehatra iray anisan’ny manana ny lanja amin’ny fampivelarana ny mpanakanto sy ny talentan’izy ireo ny Fondation H etsy Andraharo. Miovaova hatrany rahateo ireo karazana zavakanto aseho eny an-toerana…
Taorian’i Matchbox-D, i Donn, mpanao hosodoko, « graphiste » sady mpaneho an-tsary na « illustrateur », indray no haneho ny talentany etsy amin’ny Fondation H etsy Andraharo, mandritra ny iray volana, ny 13 septambra hatramin’ny 13 oktobra izao. Manitikitika, mampametra-panontaniana, izany hoe, mahaliana ity fampirantiana ity, nampitondrainy ny anarana hoe « 7M ».
Mifono hevi-dalina ny lohahevitra, misintona ny rehetra, indrindra ny mpankafy kanto, hitsidika ity toerana fampirantiana vaovaobe ity. Raha tsiahivina tokoa, anisan’ireo sehatra manohana fatratra ny zavakanto ankehitriny ny Fondation H. Ankoatra ny fanampiana amin’ny fanatanterahana hetsika samihafa, nanangana ity toeram-pampirantiana ity izy, volana vitsy lasa izay.
Nisantatra izany, ny volana mey teo, i Madame Zo, anisan’ireo notsongaina hiatrika ny famaranana tamin’ny andiany voalohany tamin’ny fifaninanana « Paritana ». Roa volana taty aoriana, izany hoe, ny volana jolay teo, nodimbiasan’i Matchbox-D ny toerana ka nanehoany ny « Vices et virtues ». Mbola anisan’ireo nisongadina nandritra ny « Paritana » koa izy. Toy izany koa ny mpanao Donn, tanora manana ny maha izy azy eo amin’ny talenta mahakasika ny tontolon’ny sary. Heverina fa tsy ho vitsy ny hitsidika ny ranty, mifanojo indrindra amin’ny fotoam-pialan-tsasatra.